Mapfumo anoti chishuwo chake ndechekuti dai ari kuZimbabwe achiyanana nehama neshamwari, asi achitiwo munhu agara asingade kuita mabhavhudhe vamwe vari munhamo. Parizvino Mapfumo ari kuEugene, Oregon muAmerica.
Mukanya uyo anozivikanwawo nekuti Hurricane Hugo kana kuti Tafirenyika akatanga kuimba nziyo dzeChimurenga munguva yehudzvinyiriri yeRhodesia akambosungwa. Munguva iyi aiimba nziyo dzakaita sa Pfumvu Paruzevha”, “Bhutsu Mutandarika”, Tumirai Vana kuHondo nedzimwe.
Pakawana nyika kuzvitonga kuzere Mapfumo akatangawo kuimba nziyo dzaishora hurumende zvikuru nenyaya dzehuori dzainge dzoitika dzakaita savanna Corruption, Marima Nzara, Mamvemve nedzimwe.
Hurukuro naThomas Mapfumo